Dibadbax looga soo horjeedo afduubyada dadka rayidka ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Dibadbax looga soo horjeedo afduubyada dadka rayidka ah oo ka dhacay magaalada...
Dibad bax looga soo horjeedo Afduubka loo geesanayo dadka rayidka ah ayaa shalay gelinkii dambe lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, iyadoo ay ka qeyb galeen ardayada dugsiyada , bahda Isboortiga iyo qeybaha bulshada.
Boqolaal dibadbaxayaal ah ayaa gelinkii dambe ee shalay isugu soo baxay wadooyinka magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo ka cabanayay afduubyada loo geysanayo dadka raiyidka ah ee kusoo badanaya magaalada Gaalkacyo.
Dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinaya ereyo ka dhan ah afduubka waxeeyna wateen boorar ay ku qonaayeen halkudhugyo ay kaga soo horjeedaan Afduubkaasi, iyagoo ka codsaday Labada maamul ee ka jira magaalada in ay wax ka qabtaan falalka afduubka ah.
Dibadbaxan ayaa ka dameeyay kadib markii wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah bahda Isbortiga ee magaalada Gaalkacyo ay kooxo hubeysani ka afduubteen magaalada Gaalkacyo, iyadoo la sheegay in ay jiraan dad hore looga afduubtay magaaladaasi.
Previous articleIsku aadka wareega 8-da Champions League oo la sameeyay Juventus iyo Bayern Munich oo isku aaday
Next articleGudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo saaka ku sii jeeda magaalada Baydhabo